Home Wararka Faahfaahin: Tirada dadka ku dhintay qaraxa maanta oo sii kordhaysa (Video/sawiro)
Faahfaahin: Tirada dadka ku dhintay qaraxa maanta oo sii kordhaysa (Video/sawiro)
Faah faahino dheeraad ah ayaa waxaa ka soo baxaysa khasaaraha ka dhashay qarax is-miidaamin ah oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa oo maanta ka dhacay isgoyska Ceelgaabta ee gudaha magaalada Muqdisho.
Sida ay sheegeen Goobjoogayaal qaraxa ayaa ahaa mid xoogan kaas si gaar ah loola bartilmaameedsaday bar- koontarool oo laga galo dhimshaa xarunta madaxtooyada, kuna ku taalla halkaasi. Wararka ayaa sheegaya in qaraxa uu geystay khasaare xoogleh oo isugu jiro dhimasho iyo dhaawac soo gaaray askar iyo dad shacab ah oo ku sugnaa goobta uu qaraxu ka dhacay.
Qaraxa ayaa waxa ku dhintay dad, wararka ayaana sheegaya in ay sii kordhayso dadka la sheegay in ay ku dhinteen qaraxa. Waxaa sidoo kale burburay gaadiid u badan kuwa raaxada iyo mootooyin nooca bajaajta oo xilligaas marayey isgoyska Ceelgaabta oo ah meesha uu qaraxu ka dhacay.
Gawaarida uu dhibka soo gaaray waxaa kamida Gaari uu lahaa imaamka beesha Abgaal Imaan Maxamed laakiin sida la sheegayo imaamka ma saarmayan gaariga, intii saarneed waxba kuma noqon.
Xaalada Muaqdisho ayaa ka soo daraysa maalinba maalinta ka danbeeysa. Waa qaraxii labaad oo muddo 24 saac gudaheed ka dhacaya caasimada, waxaana shalay mid kale oo is-miidaamin ahaa uu ka dhacay xarunta Villa Baydhaba ee Muqdisho.